XOG: Waa imise Odayaashii u tagay Al-Shabaab ee loo diiday in ay guryahoodii Baladxaawo ku noqdaan? +Cabasho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Waa imise Odayaashii u tagay Al-Shabaab ee loo diiday in ay...
XOG: Waa imise Odayaashii u tagay Al-Shabaab ee loo diiday in ay guryahoodii Baladxaawo ku noqdaan? +Cabasho
Baladxaawo (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Magaalada BaladXaawo ayaa tibaaxaya, in Odayaashii soo xulay xildhibaannada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee ay u yeereen Ururka Al-Shabaab, kaddibna u tagay in loo diiday inay ku laabtaan degaannada ay dowladda ka arrimiso, ee ay markii hore ka tageen.
Ilaa iyo 19 oday oo ka tagay magaalada Baledxaawo ayaa maamulka magaaladaasi waxa uu u diiday inay soo galaan magaaladaasi.
Diiriye Salaad Raage oo ka mid ah odayaasha ayaa sheegay in loo diiday inay dib ugu laabtaan magaalada Baladxaawo.
”Wax digniin ah oo ay noo sheegeen ama wax yeerid ah ama ay noo sheegeen inaanan meeshaas aadin ma ay jirto.” ayuu yiri Diiriye Salaad oo la hadlayay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da.
Wuxuu kaloo hadalkiisa raaciyay; ”Haddii aanay naga warqabin oo dad laga kala tagay aan noqonnay oo qofba habeen la qabsanaayo oo la iska gowracaayo aan noqonnay inay na dhibaateeyaan un miyey xaq u leeyihiin”.
Si kastaba, Dhibaatada iyo Culeyska soo food saaray Oday dhaqameedkii soo xulay xildhibaannada ayaa u muuqda laba daran mid dooro, iyadoo weli ay waajibaadkooda ka mid tahay soo xulista xildhibaannada heer federaal iyo heer maamul goboleed intuba.
Xafiiska Halqaran.com, Gedo
Odayaashii Shabaabka u tagay
axmed August 21, 2019 At 14:33
In la laayo ayey istaahilaan Xaaraata, Odayaalna ma aha waa munaafaq miiran.